प्रतिष्ठानमा आगो लगाईन्छ, कि लाग्छ ? खोई अनुसन्धान प्रतिवेदन – esetokhari.com
प्रतिष्ठानमा आगो लगाईन्छ, कि लाग्छ ? खोई अनुसन्धान प्रतिवेदन
लंका जलेपछिको शंका ‘हचुवामा बिमा कम्पनीको भुक्तानी’ अनुसन्धानको जिम्मेवारी कसको ?
२०७७ मंसिर १७, बुधबार ११:०७
नेपालगन्ज : हरेक बर्ष महिनौपिच्छे बाँकेमा कँही न कतै आगलागी भैरहेको देखिन्छ, सुनिन्छ । गर्मीको समयमा बिशेष गरी वनजंगल र कतै सहर बजार तथा घरमा पनि अलि बढि नै आगलागी हुने गरेको देखिन्छ ।
तर, चिसोमा पनि यहाँका अक्सर उद्योग, कलकारखाना, व्यवसायी प्रतिष्ठानमा आगो लागिरहेको छ । त्यो पनि एक पटक दुई पटक होइन केही उद्योग, र व्यवसायीक प्रतिष्ठानमा त पटक पटक उस्तै गरी आगो लाग्दै आएको प्रहरीको अनुसन्धानले पनि देखाएको छ ।
लोडसेडिङ भइसकेको बेला आगो लागेकोले सर्ट सर्किट हुन नसक्ने ‘कोट’हरु पत्रिकामा छापिदै आएका पनि छछन । कतिपय ठाउँमा कर्मचारीहरु घर फर्किसकेको बेला, रातीको बेला वा कोही नहुँदाको समयमा त कतिपय ठाउँमा कर्मचारी भएकै अवस्थामा पनि आगो लागेको देखिएको छ ।
अनि स्थानीय बासिन्दाले पहिलो पटक धुँवाको मुस्लो देखेपछि आगो लागेको थाहा भएको भनिएको छ । उनीहरुले आफ्नो घर पनि जल्न सक्ने डरले कम्पनीभित्र आगो निभाउन जान खोज्दा भित्र पस्न नदिएको आरोप पनि लगाएका छन् ।‘शंकाले लंका जलाउँछ’ भन्ने उखान छ । तर, यहाँ लंका जलेपछि शंका गर्नुपर्ने भएको छ । यस्तो शंका किन गर्नुपर्ने बाध्यता पर्छ त ?
करिब एक बर्ष अघि यहाँको एउटा फर्निचर उद्योग र कपास उद्योगमा आगलागी भएको थियो । त्यही समयमा वीपीचोकका केही पसल आगलागीमा परेका थिए । यहि आसपासका फर्निचर उद्योगमा त अधिकाशं महीना विराएर आगलागी हुँदै आएको छ ।
केही साता अघि नेपालगन्जकै एक फर्निचर उद्योग र एक मिडिया हाउसमा आगलागी भएको छ । बााके र नेपालगन्जमा बर्षेनी यस्ता घटना भैरहेका छन ।
घटनापछि प्रहरीले अनुसन्धानलागि भन्दै भौकाल मच्चाउँने पनि गरेको छ । तर, अहिलेसम्म यी र यस्ता आगलागीका घटना कनि कसरी हुन्छ कसले गर्छ यस बारे कुनै अनुसन्धानात्मक प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन सकेको देखिदैन । आगलागी हुन्छ, घटना स्थलमा प्रहरी आउँछ उद्योगीले सररर…. आफनो बयान दिन्छ मानौं १० लाखको सम्पतिमा उसले एक करोड देखाउँछ ।
प्रहरीले मुचुल्का बनाउँछ फर्केर जान्छ अनि काम सकिन्छ । मतलब अब यसको अनुसनधान गरी यथार्थ कारण कसले पत्ता लगाउँने ? यो जिम्मेवारी र दायित्व कसको ? अनि अधिकाशं मालिकले आफनो र कमपनी तथा उद्योगको विमा गरेका हुन्छन । उनीहरूलाई आगलागीपछि आगो निभाउने भन्दा पनि विमा कम्पनीसँग सेटिङ मिलाउँने हत्तारो हुन्छ ।
अर्थ फरक नलागोस् : बाँकेको नेपालगन्ज, कोहलपुर लगायतका सहरमा यसरी लाग्ने आगलागीमा मालिककै बिशेष हात र गलत उद्देश्य भएको हुनसक्ने उक अध्ययनले पनि देखाएको छ ।
कम्पनी वा उद्योग घाटामा जाँदा, कर्मचारीलाई तलब दिन नसक्दा, बैंक लोनले टाउको नाघिसकेपछि यी सबै तनावबाट केही मुक्ति पाउन उद्योग, कम्पनी तथा व्यवसायी प्रतिष्ठानका सञ्चालकले यो वा त्यो वहानामा आगो लगाउने सम्भावना पनि बढी रहेको उक्त अध्ययनले देखाएको छ ।
यस्ता स्थानमा आगलागी भएपछि सम्बन्धी निकायले गमभीरता पूर्वक अनुसन्धान गर्न, आबश्यक देखिएको छ । बिमा कम्पनीले पनि सञ्चालकको हावादारी तथ्याकंका आधारमा नभई उक्त संस्थाको आय, व्यय, कारोवार सबैलाई मनन गरी अनुसन्धान गरी मात्रै उचित क्षतिको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
करिब एक बर्ष अघि काभ्रेको उग्रतारा जनगालस्थित मायोज चाउचाउ कारखानामा भयङ्कर आगो लागेको थियो । मायोज चाउचाउ हिमालयन स्न्याक्सले उत्पादन गर्दै आएको थियो । यो राजेन्द्र खेतानको कम्पनी हो। राजेन्द्र खेतान कै अर्को कम्पनी पनि छ एभरेस्ट इन्स्योरेन्स । यसको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष खेतानै हुन् ।
आफ्नै कम्पनीमा लागेको आगोको बीमा स्वरुप आफ्नै कम्पनीले नियम र प्रावधान पूरा नगरी चार करोड भुक्तानी दिएको थियो । त्यसपछि बीमा समिति र खेतानबीच चर्काचर्की परेको घटना पनि सार्वजनिक भएकै हो ।
भोली बाँकेमा पनि यस्तो अवस्था नआउला भन्न सकिदैन । यसैले अहिलेले नै आगलागीको घटनामा सम्बन्धीत निकाय सचेत भएर गम्भीर रूपमा अनुसन्धानपछि मात्रै बिमा रकम भुक्तानीका लागि उचित सिफारिसमा लाग्न जरूरी छ ।
आगो कसरी लाग्यो, पत्तै लाग्दैन । तर, सत्प्रतिशत सञ्चालकको वा मालिकको एउटै रेडिमेट जवाफ आउँछ विद्युत तार सर्ट भयो । र, आगो लाग्यो । प्रहरी, विमा कम्पनी वा अन्य सम्बन्धीत निकाय अनुसन्धान बिनै यसैमा सहमति जाउँछन । किन कि अधिकाशं यस्ता घटनामा आपसी मिलेमतो र सेटिङ पनिहुने एक राष्ट्रिय संस्थाको अनुसन्धान प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
बाँकेमा भएका यस्ता आगलागीको अहिले पनि प्रहरीदेखि प्रशासन तथा स्थानीय हतसँग परम्भीरक अनुसन्धानको प्रतिवेदन एउटा पनि छैन । जस्तो मंगलबार राती मात्रै धम्बोझीको स्थित कमल इन्टरप्राइजेजमा आगलागी भएको छ । यसमा सञ्चालकले दुई करोडको क्षति दाबी गरेका छन ।
यदपी समबन्धीत निकायले यसको प्रभावकारी अनुसन्धान गरी वास्तविक नोक्सान एकिन गर्ने सक्नुपर्छ । यस्तै यसअघिका आगलागी जो अनुसनधानमा छन यीनको पनि वासतविक नोक्सानी एकिन गर्ने र त्यहि अनुसार बिमा कम्पनीलाई भुक्तानीका लागि सिफारिस गर्ने प्रावधान प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । ।
नेपालका बिमा कम्पनीले आफ्नो खल्तीबाट सबै बिमा रकम तिर्ने हैन । उनीहरुले पनि विदेशका बिमा कम्पनीसित रिइन्स्योरेन्स गर्ने गरेका छन । अधिकांश बिजनेस हाउसहरुले आफ्नै बिमा कम्पनी खोलेका छन् । प्राइम इन्स्योरेन्समा राजेन्द्र खेतानमात्रै हैन, उनका भाइ पीपी खेतान पनि संलग्न छन् ।
प्राइम र एभरेस्टमा रतनलाल संघाइ र मधुसुदन अग्रवाल दुवै सञ्चालक छन् । रतनलाल संघाइ ग्रुपका मालिक हुन् । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा अध्यक्ष र सञ्चालकमा पनि दाजु पुरुषोत्तमलाल संघाइ अध्यक्ष छन् । भाइ गोविन्दलाल संघाइ सञ्चालक छन् ।
बोर्डमा नभए पनि बीमा कम्पनीमा लगानी गर्ने मालिकहरु प्रशस्त छन् । उनीहरुले आफ्नै लागि के कति अनियमितता गर्छन्, त्यो खोजीको विषय हुनसक्छ । बिमा समितिले पनि यो समस्या महसूस गरिसकेको छ । यसैले यसरी हुने आगलागी किन, केका लागि, कसरी हुन्छन र कसले कुन अवस्थामा गर्छ यस बिषयमा सम्बन्धी निकायले पूर्ण अनुसन्धान गर्न आबश्यक छ ।
बाँके प्रहरी प्रमुख एसपी ओमबहादुर राना नेपालगन्जमा पछिल्लो समय भएका आगलागीका घटनामा प्रहरीले अहिले पनि अनुसन्धान चलाईरहेको बताउँछन । तर, यसअघि बाँकेमा हुने यस्ता आगलागीको अनुसन्धान प्रहरीले गम्भीर रूपमा गर्ने गरेको देखिदैन । बिमा कमपनीले पनि सञ्चालकले दाबी गरेअनुसारको रकम हचुवाको भरमा भुक्तानी दिदै आएको खुलेको छ ।